हाम्रो आँखालाई पूरक र Color्ग प्यालेट योजनाहरू किन चाहिन्छ ... र जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ Martech Zone
किन हाम्रो आँखालाई पूरक रंग प्यालेट योजनाहरू चाहिन्छ ... र जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ
बिहीबार, मार्च ० 18, २०२० बुधबार, अक्टोबर 13, 2021 Douglas Karr
के तपाईंलाई थाहा छ वास्तवमा जैविक विज्ञान कसरी पछाडि दुई वा बढी रंगले एक अर्काको पूरक गर्दछ? म नेत्र रोग विशेषज्ञ वा एक optometrist होइन, तर म विज्ञान जस्तो अनुवाद मेरो आफ्नै साधारण मान्छे को लागी यहाँ अनुवाद गर्न कोशिस गर्छु। सामान्य रूपमा रंगको साथ सुरु गरौं।
रंगहरू फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्
एक स्याउ रातो छ ... ठीक छ? ठीक छ, वास्तव मा छैन। स्याउको सतहबाट प्रकाश कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ र अपवर्तित हुन्छ भन्ने फ्रिक्वेन्सीले यसलाई पत्ता लगाउन योग्य बनाउँदछ, हाम्रो आँखाले संकेतको रूपमा रूपान्तरण गर्दछ, हाम्रो दिमागमा पठाइन्छ जहाँ हामी यसलाई "रातो" भनेर चिन्छौं। उह ... त्यसले मेरो टाउको दुख्यो कि यसको बारेमा सोच्दै। यो यद्यपि सत्य छ ... रंग केवल प्रकाशको आवृत्ति हो। यहाँ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम र प्रत्येक रंगको फ्रिक्वेन्सीको दृश्य छ:
यसैकारण प्रिज्ममा औंल्याइएको सेतो बत्तीले इन्द्रेणी उत्पादन गर्दछ। वास्तवमा के हुँदैछ भन्ने कुरा यो हो कि क्रिस्टलले तरंगदैर्ध्यको आवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै छ किनकि प्रकाश खण्डन गरिन्छ:
क्रिस्टल प्रिज्मले सेतो बत्तीलाई धेरै र dispहरूमा विभाजित गर्दछ।
तपाईंको आँखाहरू फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरहरू हुन्
तपाईंको आँखा साँच्चिकै इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममा रqu्ग फ्रिक्वेन्सीहरूको दायराको लागि फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टर हो। र colors्गहरू पत्ता लगाउन तपाईंको क्षमता तपाईंको आँखाको भित्तामा विभिन्न प्रकारका शंकुहरूको माध्यमबाट हुन्छ जुन तपाईंको अप्टिक स्नायुहरूमा जडित छन्। प्रत्येक आवृत्ति दायरा यी शंकुहरू द्वारा पत्ता लगाइन्छ, त्यसपछि तपाईंको दिमागमा पठाइएको तपाईंको अप्टिक स्नायुमा संकेतमा अनुवाद गरिएको, जहाँ यो पहिचान गरियो।
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो कि तपाईं साँच्चिकै उच्च कन्ट्रास्टको केहि चीजमा लामो समय हेर्न सक्नुहुन्छ, टाढा हेर्नुहोस्, र तपाईंले हेरिरहनु भएको मूल र matchहरूसँग मेल नखाने पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ? मानौं कि यो सेतो पर्खालमा निलो वर्ग छ:
केहि समय पछि, तपाईंको आँखाको कक्षहरू जसले नीलो प्रकाशको प्रशोधन गर्दछ थकित हुनेछन्, जसले तपाईंको दिमागमा पठाइएको स slightly्केत बनाउँदा केही कमजोर भयो। भिजुअल स्पेक्ट्रमको त्यो अंश थोरै दबिएको छ, जब तपाईं निलो वर्गमा घोरिए पछि सेतो पर्खालमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं सुस्त सुन्तला अफ्रीमेज देख्नुहुनेछ। तपाईले हेरिरहनु भएको भित्ताबाट बत्तीको सेता स्पेक्ट्रम हो, नीलोको एक सानो सेकेण्ड घटाउनुहोस्, जुन तपाईंको मस्तिष्क सुन्तलाको रूपमा प्रकृया गर्दछ।
रंग सिद्धान्त १०१: पूरक रंगहरू तपाईंको लागि काम गर्दै
यदि त्यो थकान भएन भने, हाम्रो आँखा र दिमागले कडा परिश्रम गर्नुपर्दैन धेरै तरle्ग लम्बाइहरू (उदाहरण: रंगहरू) जुन उनीहरूले हेरिरहेका छन्।
सद्भाव बनाम दृश्य शोर
रंग बनाम ध्वनीको समानता गरौं। यदि तपाईं भिन्न आवृत्ति र भोल्युमहरू सुन्नुहुन्छ जुन एक अर्काको पूरक थिएनन्, तपाईं यसको रूपमा सोच्नुहुन्छ शोर। यो र colorको विपरित होईन, जहाँ पत्ता लगाएको चमक, कन्ट्रास्ट र रंग हुन सक्छ नेत्रहीन हल्ला र पूरक कुनै पनि दृश्य माध्यममा, हामी सद्भावको लागि काम गर्न चाहन्छौं।
यो किन हो कि तपाईले उज्यालो रातो शर्ट लगाएको फिल्मको पृष्ठभूमिमा अतिरिक्त देख्नुहुन्न। र यो कारणले गर्दा भित्री सजावटहरूले कडा परिश्रम गर्छन् भित्ताहरू, फर्नीचर, कला, र कोठाको अन्य डिजाइनहरू उनीहरू डिजाइन गर्दै छन्। रंग उनीहरूको मस्तिष्कको र interpret्ग व्याख्या गर्न को लागी कत्ति सजिलोको आधारमा यसमा हिड्दछ जब मुड सिर्जना गर्न मिडिया सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ।
तपाईंको रंग प्यालेट सुन्दर तालमेलमा एक ब्यान्ड भेला बराबर हो। र आवाज र इन्स्ट्रुमेन्टहरू भोल्युम र फ्रिक्वेन्सीमा नजिकबाट पign्क्तिबद्ध गरेको रूपमा ... यस्तै तपाईंको रंग प्यालेटको पूरक र doहरू पनि गर्नुहोस्। कलर प्यालेट डिजाइन पेशेवरहरूका लागि साँच्चिकै एक कला फाराम हो जसले राम्ररी उनीहरूको रंग पत्ता लगाउँदछन्, तर यो बिल्कुल एक कम्प्युटेशनल विज्ञान पनि हो किनभने मानार्थ फ्रिक्वेन्सीहरू गणना गर्न सकिन्छ।
Harmonies मा अधिक चाँडै ... रंग र फेरि सिद्धान्तमा फर्कौं।
RGB र .्गहरू
डिजिटल स्पेक्ट्रम भित्रको पिक्सेल रातो, हरियो र नीलो संयोजनको छ। रातो = ०, हरियो = ०, र निलो = ० यस रूपमा प्रदर्शित हुन्छ सेतो र रातो = २255, हरियो = २255, र निलो = २255 लाई हेरिएको छ कालो। सबैको बीचमा तीन फरक फरक र color्ग हुन्छ। पूरक रंग गणनाको धेरै आधारभूतहरू धेरै सरल छन् ... नयाँ RGB मानको लागि २255 बाट आरजीबी मानहरू घटाउनुहोस्। यहाँ एक उदाहरण छ:
आरजीबी (२२,,, 243, )०)
आरजीबी (२255-२243,, २255-१-154, २255-80०)
सुन्तला र नीलो र this्गको बीचको यो प्रकाश फ्रिक्वेन्सीबीच भिन्नता यो विपरित छ, तर अहिलेसम्म यो हाम्रो आँखाको लागि व्याख्या गर्न गाह्रो छैन। रंग फ्रिक्वेन्सीहरू हाम्रो रिसेप्टर्सहरूको लागि पूरक र रमाईलो हुन्!
एक रंग गणना गर्न सजिलो छ ... कम्प्युटि more or वा अधिक पूरक रंगहरूको लागि तपाईले विकल्पहरूको प्रत्येक बिच बराबर मात्रा गणना गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यो किन हो रंग प्यालेट योजना जेनरेटरहरू यति सजिलो मा आउनुहोस्! धेरै थोरै कम्प्युटेशनको आवश्यक छ, यी उपकरणहरूले तपाईंलाई धेरै र colorsहरू प्रदान गर्दछ जुन एक अर्काको पूरक हुन्छन्।
र .्ग पाel्ग्रा
र colors्गहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्नु भनेको र wheel्गी व्हील प्रयोग गरेर उत्तम दृश्य हुन्छ। रहरू सर्कलमा व्यवस्थित छन् तिनीहरूका सापेक्षित फ्रिक्वेन्सीमा आधारित छैन। रेडियल दूरी र theको संतृप्ति र र theको ह्यूको रूपमा सर्कलमा अजीमुथल स्थिति हो।
रमाइलो: सर आइज्याक न्यूटनले पहिलो पटक १ first1665 first मा कलर व्हील विकसित गरे, जुन प्रिज्मको साथ उनका प्रयोगहरूको लागि आधार हो। उनका प्रयोगहरूले सिद्धान्ततर्फ डो led्यायो कि रातो, पहेंलो र निलो प्राथमिक र colors्गहरू थिए जहाँबाट अन्य सबै रंगहरू निकालेका छन्। साइड नोट ... उसले प्रत्येक र toमा म्यूजिकल "नोटहरू" पनि लगाउँदछ।
सद्भावका साथ मलाई आर्म…
रंग Harmonies को प्रकार
र कसरी सम्बन्धको प्रत्येक मानार्थ र colors्गको सेट गणना गरिन्छ भनेर चिनिन्छ सामंजस्य। यहाँ एक उत्कृष्ट सिंहावलोकन भिडियो छ:
बिभिन्न विशेषताहरु प्रत्येक प्रकार संग सम्बन्धित छ:
समान रंगका समूहहरू जुन र that्ग पा wheel्ग्राहरूमा एक अर्काको छेउमा छन्।
मोनोक्रोमेटिक - समूहहरू एकल आधार रंगबाट लिइएको र यसको शेडहरू, टोनहरू, र टिप्सहरू प्रयोग गरेर विस्तार गरियो।
ट्रायड - र colors्गको समूह जुन चारै तिर समान रूपमा टाढा हुन्छ रंग पहिया
पूरक रंगका समूहहरू जुन र्ग पा wheel्ग्रामा एक अर्काको बिरूद्ध छन्।
पूरक विभाजन गर्नुहोस् पूरकको भिन्नता जहाँ पूरकको नजिक दुई रंगहरू प्रयोग गर्दछ।
आयत (टेट्राडिक) - दुई पूरक जोडी मा व्यवस्था गरीएको चार र colors्ग को उपयोग गर्दछ
स्क्वायर - आयत जस्तै, तर सबै चार र colorsहरू सँग समान रूपमा रंग वृत्तमा चारै तिर दाग
यौगिक - र and र यसको पूरक र toको नजिक दुई रंगहरू
शेडहरू - टिन्टको समायोजन (हल्कापनमा वृद्धि), वा प्राथमिक रंगको लागि छाया (अँध्यारो)।
यी व्यक्तिपरक विषयवस्तुहरू होइनन्, तिनीहरू वास्तविक गणित गणना हुन् जसले राम्रो नामहरू प्रयोग गर्छन् जसले हामीलाई गणनालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
रंग प्यालेट योजना जेनरेटरहरू
एउटा रale्ग प्यालेट योजना जेनरेटरको प्रयोग गरेर, तपाईं यस जस्तो सुन्दर, पूरक रंग संयोजनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
म क्लाइन्ट साइटहरूमा काम गर्दा म अक्सर र color्ग प्यालेट योजना जेनरेटरहरू प्रयोग गर्दछु। किनभने म र colors्गमा विशेषज्ञ छैन, यी उपकरणहरूले मलाई पृष्ठभूमि, बोर्डरहरू, फुटर पृष्ठभूमि, प्राथमिक र माध्यमिक बटन रंगहरू जस्तै राम्रा चीजहरू छान्न मद्दत गर्दछ। परिणाम एक वेबसाइट छ जुन आँखालाई धेरै मनपर्दछ! यो एक सूक्ष्म, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रणनीति हो जुन तपाइँको कुनै पनि चीजको डिजाइनमा लागू हुन्छ - विज्ञापनबाट सम्पूर्ण वेबसाइटमा।
यहाँ केहि उत्कृष्ट रंग प्यालेट योजना जेनरेटरहरू अनलाइन छन्:
एडोब - अप5र colorsहरू सहितको उत्कृष्ट उपकरण जहाँ तपाईं फरक प्रकारको परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ, समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको विषयवस्तु कुनै पनि एडोब उत्पादनमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्रान्डलाइन - आधिकारिक ब्रान्डको रंग कोडहरूको वरिपरि सब भन्दा ठूलो संग्रह।
क्यानभा - एक तस्विर अपलोड गर्नुहोस् र तिनिहरू यसलाई तपाईंको प्यालेटको लागि जगको रूपमा प्रयोग गर्नेछन्।
Colllor - मात्र केहि क्लिकको साथ एक लगातार वेब रंग प्यालेट उत्पन्न गर्नुहोस्।
रंग डिजाइनर - मात्र एउटा रंग छान्नुहोस् वा प्रिसेलेक्टेड रंगहरू प्रयोग गर्नुहोस् र अनुप्रयोगले बाँकी काम गर्दछ।
रंग हन्ट - रंगीन प्रेरणा को लागी हजारौं ट्रेन्डी हातले उठाएको रंग प्यालेटको साथ नि: शुल्क र खुल्ला प्लेटफर्म
कलर्कुलर - इन्स्टाग्रामको लागि र color्ग प्यालेट उत्पन्न गर्नुहोस् यसलाई अधिक सौंदर्यको लागि रमाईलो बनाउन।
Colormind - र color्ग योजना जेनरेटर जसले गहिरो शिक्षा प्रयोग गर्दछ। यसले फोटोग्राफ, चलचित्र र लोकप्रिय कलाबाट र from्ग शैलीहरू सिक्न सक्छ।
कलरस्पेस - केवल एक देखि तीन र colors्ग प्रविष्ट गर्नुहोस् र केहि योजनाहरू उत्पन्न गर्नुहोस्!
कलरकोड - बायाँमा सद्भाव शैलीको संख्याको साथ तपाईंको र p्ग प्यालेट सिर्जना गर्न वास्तवमै एक सुन्दर स्क्रीन-व्यापी अनुभव।
COLOUR सर्भरहरू - एक रचनात्मक समुदाय जहाँ विश्वभरका मानिसहरूले र colors्ग, प्यालेटहरू, र ढाँचा सिर्जना र साझेदारी गर्दछ, भर्खरको चलनको बारेमा छलफल गर्दछन् र रंगीन लेखहरू पत्ता लगाउँदछन्।
कूलर - उत्तम प्यालेट सिर्जना गर्नुहोस् वा हजारौं सुन्दर र color्ग योजनाहरूबाट प्रेरित हुनुहोस्।
डाटा र Color्ग पिकर - र colors्गको श्रृंखला बनाउन प्यालेट छनौटकर्ता प्रयोग गर्नुहोस् भिजुएली इक्वाडिस्टिभ.
ख्रोमा - एआई प्रयोग गर्न को लागी तपाईलाई कुन र like्ग मन पराउछ र खोज्न को लागी प्यालेटहरु सिर्जना, खोज, र बचत गर्न को लागी।
भौतिक डिजाइन - सिर्जना गर्नुहोस्, साझेदारी गर्नुहोस्, र तपाईंको UI का लागि र color्ग योजनाहरू लागू गर्नुहोस्। यो तपाईको अनुप्रयोगको निर्यातको साथ आउँदछ।
मुजली र्गहरू - र color नाम वा कोड थप्नुहोस्, र एक सुन्दर प्यालेट उत्पादन गर्नुहोस्।
पलाटन - आधारभूत र choose छनौट गर्नुहोस् र प्रेरित हुनुहोस्।
Veranda - आश्चर्यजनक रंग प्यालेटहरूको टनबाट प्रेरित हुनुहोस्।
र Color र पहुँचता
कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् जब तपाईं अर्को प्यालेट योजना डिजाईन गर्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ दर्शनीय कमजोरी र र defic्गको कमीका साथ व्यक्तिको एक महत्त्वपूर्ण मात्रा छ जुन तपाईंको अनुभवहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न आवश्यक छ।
कन्ट्रास्ट - प्रत्येक स्वतन्त्र रंग को एक छ luminance। ओभरले र आसन्न वस्तुहरूका रहरू visual.:: १ को सान्दर्भिक ल्युमिनान्स अनुपातमा हुनुपर्दछ दृश्य भैरहेकाहरूका लागि फरक पार्न तिनीहरू सक्षम हुन। म आफैं अनुपात आफै हिसाब गर्ने कोसिको समस्याबाट पार गर्ने छैन, तपाईले दुई र two्गको अनुपात परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ मायालु, कन्ट्रास्ट अनुपात, वा कलरसेफ.
इकोनोग्राफी - रातोमा फाँट हाइलाइट गर्दै र someone कमी भएको कसैलाई सहयोग गर्दैन। निश्चित हुनुहोस् केहि प्रकारको सन्देश वा आइकनमा उनीहरूलाई बताउन को लागी एक मुद्दा छ।
फोकस - धेरै व्यक्ति कुञ्जीपाटी वा स्क्रिनरिडरहरूको साथ नेभिगेट गर्छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सही तरिकाले सबै पहुँच ट्यागिंगको साथ डिजाइन गरिएको छ तपाईंको साइटको फाइदा लिन। दृश्य कमजोरी भएका व्यक्तिहरूका लागि सेतो खाली ठाउँको प्रयोग र फन्ट-साइज बढाउन वा घटाउने क्षमता जहाँ यसले लेआउटलाई नष्ट गर्दैन, महत्वपूर्ण छ।
के तपाई आँखा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ? रंग विशेषज्ञ? पहुँच विशेषज्ञ? कृपया मलाई यस लेखलाई सुधार गर्नका लागि कुनै मार्गदर्शन प्रदान गर्न नहिचकिचाउनुहोस्!
टैग: दर्दनाकCanvaरंग फ्रिक्वेन्सीहरूरंग प्यालेटर color्ग प्यालेट योजनाहरूरंग प्यालेटहरूरंग योजनाहरूरंग सिद्धान्तरंगपूरैपूरक रंगहरूकम्पाउन्डआँखाहरुएकल रंगआयतरातो निलो हरियोRGBरंगहरुविभाजन पूरकवर्गटेट्राडिकतीन
इमेजेन: भण्डार गर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस्, र व्यवस्थित गर्नुहोस् र भिडियो र रिच मेडिया सामग्रीको यो फुर्ति DAM मा